आज राति १२ बजेबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्यो , ग्यासको मूल्य घट्यो.::देश र जनताप्रति समर्पित
आज राति १२ बजेबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्यो , ग्यासको मूल्य घट्यो.
पोखरा- मंगलवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ ।
पेट्रोल तथा डिजेलमट्टितेलको साविकको खुद्रा विक्री मूल्यमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ, र ५० पैसाले वृद्धि हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । एलपी ग्यासमा भने २५ रुपैयाँ घटाइएको गोइतले बताए ।
आयल निगमको उक्त निर्णयअनुसार जसअनुसार काठमाडौ (थानकोट डिपोबाट १५ कि।मि। क्षेत्रभित्र)को पेट्रोलको नयाँ विक्री मूल्य रू १ सय ९ र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य रू ९७ हुनेछ भने एल।पि। ग्यासको खुद्रा मूल्य रू १३ सय ७५ हुनेछ ।
गोइतले हवाई ईन्धनको विक्री मूल्य यथावत राखिएको बताए ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५७६ मा एलपि ग्यासमा करीब ६ अर्व नोक्सानी व्यहोरेको थियो, जसको कारणले हालसम्म स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन हुन सक्ने अवस्था आएको थिएन ।